Trump oo ku hanjabay inuu militari u adeegsan doono dibad-baxyada Mareykanka - Caasimada Online
Home Dunida Trump oo ku hanjabay inuu militari u adeegsan doono dibad-baxyada Mareykanka
Trump oo ku hanjabay inuu militari u adeegsan doono dibad-baxyada Mareykanka
Washington (Caasimada Online) – Madaxweyne Donald Trump ayaa wacad ku maray inuu amri doono ciidamada militariga inay la tacaalaan dibad-baxyada rabshadaha wata ee lasii degaya gobollo badan oo ka mid ah Mareykanka.
Trump ayaa sheegay inuu kumanaan askari usoo diri doono waddooyinka caasimadda, wuxuuna ku hanjabay in sidoo kale gayn doono gobollada aan awoodin inay xakameeyaan xaaladda.
Hadalka Trump ayaa yimid toddobaad kadib markii George Floyd oo ahaa nin madow ah oo aan hubeysneyn lagu dilay magaalada Minneapolis kadib markii askari caddaan ah inta madaxa dhulka u dhigay, kadibna luqunta jilib ka saaray illaa ay nafta ka baxday.
Kadib markii lagu cambaareeyey inuu ka aamusan yahay xasaraddan kasii daraysa, ayaa Trump waxa uu khudbad uu kula hadlay shacabka ka jeediyey Aqalka Cad, xilli booliskuna ay dibad-baxayaal ku sugnaa banaanka u adeegsanayeen sunta dadka ka ilemysiisa.
“Waxaan dirayaa kumanaan iyo kumanaan ciidamo aad u hubeysan ah, shaqaale milatari iyo saraakiisha hirgelinta sharciga, si ay u joojiyaan rabshadaha, bililiqada, burburinta hantida iyo weerarka,” ayuu yiri madaxweyne Trump.
Waxa uu cambaareeyey rabshado habeen ka hor ka dhacay Washington, oo uu ku qeexay “ceeb buuxda”, wuxuuna ugu baaqay barasaabyada gobolka inay si deg deg ah uga howlgalaan inay si awood leh “u maamulaan waddooyinka.”
“Haddii magaalo ama gobol uu diido inuu qaado tallaabooyinka lagama maarmaanka u ah inay difaacaan nolosha iyo hantida dadkooda, waxaan keeni doonaa militariga Mareykanka, waxaana si deg deg ah ugu xallin doonaa dhibaatadan.”
Hadalka Trump ayaa durba la kulmay cambaareyn xooggan.
“Waxa madaxweynaha uu maanta sameeyey ayaa ah inuu militariga Mareykanka ugu wacay shacabka Mareykanka,” waxaa sidaas twitter ku yiri barasaabka New York, Andrew Cuomo.